SASSUOLO VS AC MILAN: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan! – Gool FM
SASSUOLO VS AC MILAN: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan!
Raage November 5, 2017
(Sassuolo) 05 Nof 2017 – Waxaa caawa kulmaya labada kooxood ee AC Milan vs Sassuolo oo uu si ahaan ku xiran yahay aayaha macallin Vincenzo Montella oo ay kooxdiisu kici la’dahay dhanka horyaalka.
Dhanka Sassuolo: Laacibka Magnanelli ayaa usoo laabanaya kooxda Bucchi, waloow uu safku ka duwanaan karo kooxdii wajahdey Napoli. Dhanka weerarka waa inuu kala doortaa inuu kalsoonida siiyo Falcinelli ama uu dib u kiciyo laacibka.
Dhanka Milan: Davide Calabria ayaa soo noqonaya kaddib jugtii kulankii Verona. Zapata ayaa safka hore uga cad cad Musacchio. weerarka dhexe waxaa keli ku ah Kalinic, Andrè Silva iyo Cutrone ayaa kaydka ku noqonaya. Montolivo ayaa isna kaydka ku noqon doona.
KAYDKA LABADA KOOXOOD
77 PEGOLO, 70 MARSON, 21 LIROLA, 26 ROGERIO, 8 BIONDINI, 29 CASSATA, 12 SENSI, 10 MATRI, 14 SCAMACCA, 17 PIERINI
30 STORARI, 90 A. DONNARUMMA, 2 CALABRIA, 22 MUSACCHIO, 20 ABATE, 15 GOMEZ, 29 PALETTA, 31 ANTONELLI, 18 MONTOLIVO, 4 MAURI, 9 ANDRÈ SILVA, 63 CUTRONE
Dell’Orco, Letschert, Frattesi, Adjapong, Goldaniga, Duncan, Berardi
Conti, Bonaventura, Biglia
TOOS u daawo: Juventus vs Benevento - LIVE (Shaxda sugan)
GOOGOOSKA: Manchester City vs Arsenal 3-1 (Man C oo Arsenal muquunisay)